उपदेशक – 2माछा
घर / बाइबल / पुरानो नियमका / उपदेशक
1:1 उपदेशक शब्दहरू, दाऊदको छोरा, यरूशलेमको राजा.
1:2 उपदेशक भने: Vanities को व्यर्थ! Vanities को व्यर्थ, र सबै व्यर्थ हो!
1:3 मानिस आफ्नो सबै श्रम बढी के छैन, उहाँले सूर्य अन्तर्गत मेहनत रूपमा?
1:4 एक पुस्ता टाढा बित्दै, र एक पुस्ता आएको. तर पृथ्वीमा सधैंभरि खडा.
1:5 सूर्य वृद्धि र सेट; यसलाई आफ्नो ठाउँमा फिर्ता, र त्यहाँ बाट, फेरि जन्म भइरहेको,
1:6 यो दक्षिण मार्फत सर्कल, र उत्तर तिर Arcs. आत्मा मा जारी, यसको सर्किट मा सबै रोशन, र यसको चक्र फेरि खोल्दै.
1:7 सबै नदीहरू समुद्रमा प्रवेश, र समुद्र ओभरफ्लो छैन. जसबाट नदी बाहिर जाने ठाउँमा, तिनीहरूले फिर्ता, त्यसैले तिनीहरू फेरि प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने.
1:8 यस्ता कुराहरू कठिन छन्; मानिस शब्दहरू तिनीहरूलाई व्याख्या गर्न सक्षम छैन. आँखा हेरेर सन्तुष्ट छैन, न त सुनुवाई द्वारा पूरा कान छ.
1:9 अस्तित्व छ कि यो के हो? भविष्यमा नै अवस्थित हुनेछ. गरिएको छ कि यो के हो? एउटै गरिन जारी हुनेछ.
1:10 त्यहाँ सूर्य अन्तर्गत केही नयाँ छ. न त भन्न कसैले छ: "हेर, यो नयाँ छ!"यसको लागि पहिले नै हामीलाई अघि थिए कि उमेर मा निस्केको ल्याए गरिएको छ.
1:11 त्यहाँ पहिलेका कुराहरू को कुनै सम्झनामा छ. वास्तवमा, न त्यहाँ भविष्यमा विगतको कुरा कुनै पनि रेकर्ड हुनेछ, ती लागि जो धेरै अन्त मा अवस्थित हुनेछ.
1:12 म, उपदेशक, यरूशलेममा इस्राएलका राजा थिए.
1:13 र म खोज्न र बुद्धिमानीपूर्वक छानबीन मेरो मनमा निर्धारित थियो, विषयमा सबै सूर्य अन्तर्गत गरिन्छ. भगवान मानिसहरूको छोराहरूलाई यो धेरै कठिन कार्य दिइएको छ, ताकि तिनीहरूले कब्जा हुन सक्छ.
1:14 म सूर्य अन्तर्गत गरिन्छ सबै देखेको छु, र हेर: सबै खालीपनको र आत्माको एउटा कष्ट छ.
1:15 को perverse सही हुन अनिच्छुक छन्, र मूर्ख संख्या असीम छ.
1:16 म मेरो हृदयमा बोलेको छु, यसो: "हेर, म महानता हासिल गरेको छ, र म surpassed छन् सबै बुद्धिमानी यरूशलेममा। "मलाई अघि थिए अनि मेरो मनमा बुद्धिमानीपूर्वक धेरै कुराहरू contemplated छ जो, र म सिकेका.
1:17 र म मेरो हृदय समर्पित छ, ताकि म प्रूडेंस र सिद्धान्त थाहा हुन सक्छ, र पनि त्रुटि र मूर्खता. अझै म पहिचान, यी कुराहरू पनि, त्यहाँ कठिनाइ छ, र आत्माको कष्ट.
1:18 किनभने यो, धेरै बुद्धि त्यहाँ पनि धेरै रिस छ. र जसले ज्ञान भन्छन्, पनि कठिनाइ भन्छन्.
2:1 म मेरो हृदयमा भने: "म निस्कने जाने र प्रसन्न साथ ओभरफ्लो हुनेछ, र म राम्रो कुरा पाउनेछन्। "अनि म यो देखे, पनि, खालीपनको छ.
2:2 हाँसो, म एउटा त्रुटि छलफल. र आनन्द गर्न, मैले भने: "तपाईं किन धोका भइरहेका छन्, कुनै उद्देश्य?"
2:3 म रक्सी मेरो शरीर फिर्ता गर्न मेरो हृदयमा निर्णय, म बुद्धि मेरो मन ल्याउन सक्छ भनेर, र मूर्खता त्यागेर, म हेर्न सम्म के मानिसहरू छोराहरू लागि उपयोगी छ, र सूर्य अन्तर्गत तिनीहरूले पर्छ के गर्न, आफ्नो जीवनको दिन को संख्या समयमा.
2:4 म मेरो काम म्याग्निफाइन्ड. म को लागि घरहरू निर्माण, र म दाखबारी लगाए.
2:5 म उद्यान र बगीचहरुमा गरे. र म हरेक प्रकारको रूखहरू तिनीहरूलाई लगाए.
2:6 र म पानी fishponds बाहिर dug, म बढ्दै रूखहरू वन सिंचाइ गर्नु सक्छ भनेर.
2:7 म पुरुष र महिला सेवकहरू प्राप्त, र म एक ठूलो परिवार थियो, साथै गाई बथान र भेडाको ठूलो बगाल रूपमा, सबै यरूशलेममा मलाई अघि थिए परे.
2:8 म चाँदी र सुन amassed, र राजा र गवर्नर्स को धन. म पुरुष र महिला गायक छनौट, मानिसहरू छोराहरू र Delights, घनघोर रक्सी को प्रयोजन को लागि कटोरे र pitchers.
2:9 र म सबै यरूशलेममा मलाई अघि थिए opulence मा surpassed. मेरो बुद्धि पनि मेरो साथ persevered.
2:10 र सबै कि मेरो आँखा चाहेको, म तिनीहरूलाई अस्वीकार गरेनन्. न त म हरेक खुशी आनन्द लिई मेरो हृदय निषेध गरे, बाट म तयार थिए कुराहरूमा नै हसाउने. र म मेरो अंश यस मानिन्छ, म मेरो आफ्नै मेहनत को प्रयोग बनाउन थिए भने.
2:11 तर जब म मेरो हात बनाएको सबै काम तिर आफैलाई गरिएका, र मेहनत गर्न जो म कुनै उद्देश्य perspired थियो, म सबै कुरा मा प्राण को खालीपनको र कष्ट देखे, र केही सूर्य अन्तर्गत स्थायी हो.
2:12 मैले जारी, बुद्धि मनन गर्न ताकि, साथै त्रुटि र मूर्खता रूपमा. "मानिसको के हो," मैले भने, "उहाँले आफ्नो निर्माता पालना गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने, राजा?"
2:13 र म बुद्धि मूर्खता surpasses देखे, तिनीहरूले अन्धकार बाट हल्का रूपमा धेरै फरक छ कि धेरै त.
2:14 एक बुद्धिमानी मानिसको आँखा आफ्नो टाउको मा हो. मूर्ख मानिसले अन्धकारमा हिँड्छ. अझै म एक अन्य जस्तै पारित टाढा भनेर सिकेका.
2:15 र म मेरो हृदयमा भने: "यदि दुवै को मृत्यु मूर्ख र आफैलाई एक हुनेछ, यो मलाई कसरी लाभ उठाउन गर्छ, यदि म बुद्धिको काम गर्न थप राम्ररी आफैलाई दिइएको छ?"अनि म मेरो आफ्नै मन भित्र बोल्दै रूपमा, म यो कि कथित, पनि, खालीपनको छ.
2:16 लागि त्यहाँ बुद्धिमानी को perpetuity मा एक सम्झनामा छैन, को मूर्ख को न त. र भविष्यमा पटक सँगै सबै कवर, OBLIVION संग. को सिकेका एक तरिका मा unlearned समान मर.
2:17 र, किनभने यो, मेरो जीवन मलाई wearied, म सूर्य अन्तर्गत सबै दुष्ट छ देखे पछि, र सबै खाली र आत्माको एउटा कष्ट छ.
2:18 फेरि, म मेरा सबै प्रयासहरु detested, जो म उत्कट सूर्य अन्तर्गत labored थियो, माथि हकदार मलाई पछि लिइने,
2:19 मलाई थाहा हुनत छैन उहाँले बुद्धिमानी वा मूर्ख हुनेछ कि. र अझै त्यो मेरो मेहनत भन्दा शक्ति हुनेछ, जसमा म toiled र चिन्तित भएको. र केहि अरू त खाली छ?
2:20 त्यसैले, म भएनन्, र मेरो हृदय थप सूर्य अन्तर्गत laboring renounced.
2:21 कसैले बुद्धि मा मेहनत गर्दा लागि, र सिद्धान्त, र प्रूडेंस, उहाँले एक प्राप्त छ के गर्ने निष्क्रिय छ पछि उहाँले छोडेर. त्यसैले यो, पनि, खालीपनको र ठूलो बोझ छ.
2:22 लागि कसरी आफ्नो सबै श्रम र आत्माको कष्ट देखि एक मानिस लाभ, जो सूर्य अन्तर्गत सास्ती गरिएको छ?
2:23 आफ्ना सबै दिन दुःखको र कठिनाइ भरिएको छ; न उहाँले आफ्नो मन आराम गर्छ, पनि रात. र यो छैन खालीपनको छ?
2:24 यसलाई खान छैन राम्रो र पेय छ, र आफ्नो प्राण आफ्नो मेहनत को राम्रो कुरा देखाउन? र यो परमेश्वरको हात हो.
2:25 त्यसैले जो भोज र धेरै म जस्तै Delights संग ओभरफ्लो हुनेछ?
2:26 भगवान दिइएको छ, आफ्नो दृष्टि मा राम्रो छ जसले मानिसलाई, बुद्धि, र ज्ञान, र आनन्द. तर पापी गर्न, उहाँले कष्ट र अनावश्यक चिन्ताकारक दिइएको छ, थप्न ताकि, र भेला गर्न, र उद्धार गर्न, उहाँलाई परमेश्वरको खुसी छ. तर यो, पनि, खालीपनको र मन को खोक्रो चिन्ताकारक छ.
3:1 सबै कुरा आफ्नो समय, र स्वर्गमा अन्तर्गत सबै कुराहरू आफ्नो अन्तराल समयमा जारी.
3:2 एक समय जन्मन गर्न, र मर्न एक समय. रोपेर एक समय, र लगाए थियो के अप पुल एक समय.
3:3 मार्न एक समय, र निको पार्ने समय. च्यात्नु एक समय, र एक समय निर्माण गर्न.
3:4 रुन्छ एक समय, र हाँस्न एक समय. शोक गर्ने समय, र नृत्य गर्न एक समय.
3:5 पत्थर छरिनु एक समय, र भेला गर्न समय. अँगालेको एक समय, र एक समय गले टाढा हुन.
3:6 बढाउनका एक समय, र गुमाउन समय. राख्न समय, र टाढा कास्ट गर्न समय.
3:7 च्यात्नुपर्थ्यो एक समय, र सी एक समय. एक समय मौन हुन, र बोल्न समय.
3:8 प्रेम एक समय, र घृणा को एक समय. युद्ध को एक समय, र शान्ति एक समय.
3:9 मानिस आफ्नो श्रम देखि थप के छैन?
3:10 म परमेश्वरको मानिसहरू छोराहरू दिइएको छ कि कष्ट देखेको छु, क्रममा तिनीहरूले कब्जा हुन सक्छ कि.
3:11 उहाँले आफ्नो समय मा राम्रो सबै कुराहरू बनाएको छ, र उहाँले आफ्नो विवाद गर्न दुनिया भर हस्तान्तरण गरेको छ, ताकि मानिस परमेश्वरले सुरुदेखि गरे जो काम पत्ता लगाउन सक्छ, पनि अन्त सम्म.
3:12 र म त्यहाँ रमाउने भन्दा राम्रो केही छ भन्ने महसुस, र यो जीवन मा राम्रो तरिकाले गर्न.
3:13 यो परमेश्वरको देखि वरदान हो: प्रत्येक मानिस खाने र पेय गर्दा, र आफ्नो श्रम को राम्रो परिणाम देख्नुहुन्छ.
3:14 म जो परमेश्वरले बनाएको छ सबै काम जारी राख्न सिकेका, perpetuity मा. हामी केहि थप गर्न सक्षम छैनन्, न त केहि टाढा लिन, परमेश्वरको उहाँले मानिसहरू डराउँदैनन् हुन सक्छ कि क्रममा गरेको छ जो ती कुराहरू देखि.
3:15 के गरिएको छ, एउटै जारी. भविष्यमा के हो, पहिले नै अस्तित्वमा छ. र परमेश्वरको बितिसकेका छ के दुरुस्त.
3:16 म सूर्य अन्तर्गत देखे: बरु न्यायको, impiety, र यसको सट्टा न्याय को, iniquity.
3:17 र म मेरो हृदयमा भने: "परमेश्वरले बस र impious न्याय, र त्यसपछि प्रत्येक कुरा को लागि समय हुनेछ। "
3:18 म मेरो हृदयमा भने, मानिसहरू छोराहरू बारेमा, परमेश्वरले तिनीहरूलाई परीक्षण भनेर, जंगली जनावर जस्तै हुन र तिनीहरूलाई प्रकट.
3:19 यस कारण, मानिसको र जनावरहरु को दूर बित्दै जाँदा एक, र दुवै अवस्था बराबर छ. एक मानिस मर्छ रूपमा लागि, त्यसैले पनि मर्न गर्न. सबै कुरा त्यस्तै सास फेर्न, र मानिस केही जनावर भन्दा बढी छ; सबै लागि यी व्यर्थ विषय हो.
3:20 र सबै कुरा एक ठाउँमा जारी; लागि पृथ्वीबाट तिनीहरूले गरियो, र पृथ्वी निम्ति तिनीहरूले सँगै फर्कन पर्छ.
3:21 आदम छोराहरू आत्मा उकालो चढ्नु भने कसले थाह, र जनावरहरु को आत्मा तल धमकना यदि?
3:22 र म मानिस आफ्नो काममा रमाउने लागि भन्दा राम्रो हुन केही फेला पारेका छौं: यो आफ्नो भाग छ. र तिनलाई जसले थप्न पर्छ, उहाँले कुरा थाहा हुन सक्छ भनेर भनी पछि हुनेछ?
4:1 म अन्य कुराहरू आफैलाई गरिएका, र म सूर्य अन्तर्गत बाहिर छन् जो झूटा आरोप देखे, र निर्दोष को आँसु, र तिनीहरूलाई कन्सोलमा कुनै एक थियो कि; र तिनीहरूले हिंसा सामना गर्न सक्षम थिए, सबै मदत गरिब हुनुको.
4:2 अनि त, म जीवित भन्दा मृत थप प्रशंसा.
4:3 र यी दुवै भन्दा सुखी, म हुन उहाँलाई न्याय, जो अहिलेसम्म जन्मेको छैन, र जो अझै सूर्य अन्तर्गत गरिन्छ जो दुष्कर्मलाई देखेको छैन.
4:4 फेरि, मैले मानिसहरूलाई सबै मेहनत विचार थियो. र म सूचना लिए आफ्नो प्रयासहरूलाई आफ्नो छिमेकीलाई को ईर्ष्या गर्न खुला छन् कि. अनि त, यस, पनि, त्यहाँ खालीपनको र superfluous फिक्री छ.
4:5 को मूर्ख मानिस मिलेर उहाँको हात Folds, र उहाँले आफ्नो शरीरलाई खपत, यसो:
4:6 "आराम संग एक मुट्ठी मेहनत साथ र प्राण को कष्ट भरिएको दुवै हात भन्दा राम्रो छ।"
4:7 यो विचार गर्दा, म पनि सूर्य अन्तर्गत अर्को व्यर्थ पत्ता.
4:8 उहाँले एक, र उहाँले दोस्रो छैन: तिनीहरूले छैनन्, कुनै भाइ. र अझै त्यो श्रम गर्न रोकिंदैन, न त धन सन्तुष्ट आफ्नो आँखा छन्, न त उहाँले झल्काउँछ, यसो: "कसको लागि म श्रम गर्न र असल कुराहरूको मेरो प्राण धोखा?"मा यो, पनि, खालीपनको र एक भन्दा कडा कष्ट छ.
4:9 त्यसैले, दुई सँगै हुन लागि यो राम्रो छ, एक एक्लै हुन लागि भन्दा. तिनीहरूले संगत को फाइदा छ लागि.
4:10 यदि एक पतन, उहाँले अन्य समर्थित गरिनेछ. एक्लै छ जो एक धिक्कार. उहाँले खस्दा लागि, उहाँले तिनलाई उचाल्न कुनै एक छ.
4:11 र यदि दुई सुतिरहेको छन्, तिनीहरूले न्यानो एक अर्को. एक व्यक्ति एक्लै कसरी खुसीले गदगद गर्न सकिन्छ?
4:12 र एक मानिस एक विरुद्ध विजयी सक्नुहुन्छ भने, दुई उहाँलाई रोक्नु सक्छ, र एक threefold कर्ड कठिनाई संग भङ्ग छ.
4:13 राम्रो बालक छ, गरिब र बुद्धिमानी, राजा भन्दा, पुरानो र मूर्ख, जो अगाडि posterity खातिर हेर्न थाहा छैन.
4:14 कहिलेकाहीं लागि, एक जेल र चेन देखि निस्कने जान्छ, एक राज्य गर्न, अर्को गर्दा, राजकीय शक्ति जन्मिएको, आवश्यकता द्वारा खपत छ.
4:15 म सूर्य अन्तर्गत हिड्ने सबैलाई जीवित देखे, र म अर्को पुस्ता देखे, जसले ठाउँमा खडा गर्नेछु.
4:16 संख्या, यी अघि अस्तित्व सबै बाहिर, असीम छ. र त्यस पछि अवस्थित हुनेछ गर्नेहरूलाई तिनीहरूलाई आनन्दित छैन. तर यो, पनि, खालीपनको र आत्माको एउटा कष्ट छ.
4:17 आफ्नो खुट्टा रक्षा, जब तपाईं परमेश्वरको घरमा कदम, र नजिक, तपाईं सुन्न सक्छ त. आज्ञाकारी लागि मूर्ख बलिदान भन्दा धेरै राम्रो छ, तिनीहरू गरिरहेका छन् कि दुष्ट थाहा छैन.
5:1 तपाईं rashly केहि बोल्न हुँदैन, न त आफ्नो हृदय परमेश्वरको सामु एक शब्द प्रस्तुत गर्न हतार हुनुपर्छ. परमेश्वरको लागि स्वर्गमा छ, र तपाईं पृथ्वीमा हो. यस कारण, तपाईंको शब्दहरू केही गरौं.
5:2 सपना धेरै चिन्ता पालना, र धेरै शब्दहरू मा मूर्खता फेला गरिनेछ.
5:3 तपाईं परमेश्वरको केहि वाचा गरेका छन् भने, तपाईं यसलाई चुक्ता गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन. र तपाईं वाचा गरेका छन् जो, यसलाई प्रस्तुत. तर एक अविश्वासी र मूर्ख प्रतिज्ञा उहाँलाई दुःखी.
5:4 र यो भाकल गर्न छैन धेरै राम्रो छ, भन्दा, भाकल पछि, प्रतिज्ञा गरियो के पूरा गर्न.
5:5 पाप गर्न आफ्नो शरीरमा कारण ताकि तपाईं आफ्नो मुख प्रयोग गर्नु हुँदैन. र तपाईं भन्न हुँदैन, एक परी को दृष्टि मा, "कुनै प्रोभिडेन्स छ।" परमेश्वरले लागि, तपाईंको वचनहरू क्रोधित भएर, आफ्नो हात को सबै कामहरू छरिनु सक्छ.
5:6 जहाँ धेरै सपना छन्, त्यहाँ धेरै Vanities र अनगिन्ती शब्दहरू हुन्. यद्यपि साँच्चै, तपाईं परमेश्वरको डर पर्छ.
5:7 तपाईं indigent विरुद्ध झूटा आरोप हेर्न भने, र हिंसात्मक न्यायलाई, र सरकार न्याय subverted, यो अवस्था भन्दा छक्क छैन. उच्च ठाउँमा ती अरूलाई छ लागि जो उच्च हो, र त्यहाँ अझै पनि अरूलाई हो, थप महत, यी माथि.
5:8 तर अन्तमा, त्यहाँ सम्पूर्ण पृथ्वीमा नियम जो राजा छ, जो उसलाई विषय हो.
5:9 एक लोभी मानिस पैसा द्वारा सन्तुष्ट गरिनेछ. र जसले प्रेम धन यसलाई कुनै फल कटनी गर्नेछ. त्यसैले, यो, पनि, खालीपनको छ.
5:10 जहाँ धेरै धन छन्, त्यहाँ पनि हुनेछ यी कुराहरू उपभोग गर्न धेरै. र यो possesses गर्ने कसरी लाभ उठाउन गर्छ, उसले आफ्नो आँखा संग धन discerns कि बाहेक?
5:11 निद्रामा काम गर्ने एक मिठाई छ, उहाँले सानो वा धेरै खपत कि. तर एक धनी मानिसको satiation सुत्न उसलाई अनुमति छैन.
5:12 त्यहाँ पनि अर्को सबैभन्दा कडा अथवा अशक्तताले छ, जो म सूर्य अन्तर्गत देखेको छु: धन मालिक को हानि गर्न राखिएको.
5:13 तिनीहरूले एक भन्दा Grievous कष्ट हराएको छन्. उहाँले एक छोरा उत्पादन गरिएको छ, को यथासक्य destitution मा जो हुनेछ.
5:14 उहाँले आफ्नो आमाको गर्भबाट निस्कने नाङ्गो भयो जसरी, त्यसैले उहाँ फर्कन पर्छ, र उहाँले आफ्नो मेहनत देखि उसलाई केही लिन पर्छ.
5:15 यो एक utterly दयनीय अथवा अशक्तताले छ कि, एउटै तरिका उहाँले आइपुगेको छ रूपमा, त्यसैले उहाँ फर्कन पर्छ. उसलाई कसरी त्यसपछि लाभ उठाउन गर्छ, उहाँले हावा लागि labored छ देखि?
5:16 उहाँले खपत आफ्नो जीवनको सबै दिन: अन्धकारमा, र धेरै चिन्ता संग, र दुःखको साथै दुःख मा.
5:17 अनि त, यो मलाई राम्रो देखिन्थ्यो छ: एक व्यक्ति खान र पिउन पर्छ भनेर, र आफ्नो श्रम को फल आनन्द गर्नुपर्छ, जसमा उहाँले सूर्य अन्तर्गत toiled छ, आफ्नो जीवनको दिन को संख्या लागि परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको. यो आफ्नो भाग छ.
5:18 र यो परमेश्वरको वरदान हो: परमेश्वरको कसलाई हरेक मानिस धन र स्रोतसाधन दिइएको छ, र जसलाई उहाँले यी उपभोग गर्ने क्षमता प्रदान गरेको छ, आफ्नो भाग आनन्द सक्छ, र आफ्नो मेहनत आनन्द पाउन सक्छ.
5:19 त्यसपछि उहाँले पूर्णतया आफ्नो जीवन दिन सम्झना हुनेछ, परमेश्वरको Delights आफ्नो मन ओगटेको किनभने.
6:1 अर्को दुष्ट पनि छ, जो म सूर्य अन्तर्गत देखेको छु, र, साँच्चै, यो मानिसहरूको बीचमा बारम्बार छ.
6:2 यो धन दिनुभएको छ परमेश्वरले कसलाई एउटा मान्छे हो, र स्रोतहरू, र आदर; र सबै कि बाहिर उहाँले चाहनुहुन्छ, केही आफ्नो जीवन अभाव छ; अहिलेसम्म परमेश्वरले उहाँलाई यी कुराहरू उपभोग गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दैन, तर जो सट्टा एक मानिस पराई तिनीहरूलाई भस्म गर्नेछ. यो खालीपनको र ठूलो misfortune छ.
6:3 एक मानिस एक सय सन्तान जन्माउन थिए भने, र धेरै वर्ष को लागि बाँच्न, र धेरै दिन को एक उमेर प्राप्त गर्न, र आफ्नो प्राण आफ्नो स्रोतको माल को कुनै प्रयोग गर्न भने, र उहाँले पनि एक दफन अभाव थियो भने: यस्तो मानिस विषयमा, म एक miscarried बच्चा उहाँले भन्दा राम्रो छ भनेर घोषणा.
6:4 उहाँले एक उद्देश्य बिना आएको र उहाँले अन्धकार मा मा जारी लागि, र आफ्नो नाम टाढा सखाप गरिनेछ, OBLIVION मा.
6:5 उहाँले सूर्य देखेको छैन, न त राम्रो र खराब बीचको फरक पहिचान.
6:6 उहाँले दुई हजार वर्ष को लागि बाँच्न थिए भने पनि, र अझै राम्ररी के राम्रो छ आनन्द छैन, छैन एउटै ठाउँमा प्रत्येक एक जल्दी गर्छ?
6:7 मानिसको हरेक श्रम आफ्नो मुख लागि हो, तर आफ्नो प्राण छैन भरिएको हुनेछ.
6:8 के बुद्धिमानी जो मूर्ख भन्दा बढी छ छैन? र pauper के गर्छ, त्यस स्थान मा जारी बाहेक, जहाँ जीवन छ?
6:9 यो तपाईं के चाहन्छन् हेर्न राम्रो छ, तपाईंलाई थाहा के गर्न सक्नुहुन्छ छैन चाहन्छन् भन्दा. तर यो, पनि, खालीपनको र आत्मा को एक अनुमान छ.
6:10 भविष्यमा जसले हुनेछ, आफ्नो नाम पहिले नै भनिन्छ गरिएको छ. र यो उहाँले एक मानिस छ कि ज्ञात छ र उहाँले बलियो हुन्छ जो एक विरुद्ध न्याय मा contend गर्न सक्षम छ भन्ने.
6:11 त्यहाँ धेरै शब्दहरू छन्, र यी धेरै, विवाद मा, धेरै खालीपनको पकड.
7:1 किन आवश्यक छ आफूलाई भन्दा ठूलो हो कि कुराहरू खोज्न मानिसको लागि, उहाँले आफ्नो जीवनमा आफूलाई लागि लाभप्रद छ के थाह जब, आफ्नो प्रवास को दिन को संख्या समयमा, र गर्दा समय छाया जस्तै द्वारा बित्दै? कसले सूर्य अन्तर्गत उहाँलाई पछि भविष्यमा के हुनेछ उहाँलाई बताउन सक्षम हुनेछ?
7:2 एउटा राम्रो नाम अनमोल nanodiamonds उपयोग गरदै भन्दा राम्रो छ, र मृत्यु को एक दिन जन्म एक दिन भन्दा राम्रो छ.
7:3 यो शोक को एक घर जान राम्रो छ, feasting एक घर भन्दा. पूर्व मा लागि, हामी सबै कुराको अन्त बारेमा सल्लाह दिइएको छ, त्यसैले जीवित विचार छ कि के भविष्यमा हुन सक्छ.
7:4 रिस हँसी भन्दा राम्रो छ. लागि countenance को दुःख मार्फत, offends सही हुन सक्छ जसले एक को प्राण.
7:5 बुद्धिमानको को हृदय शोक को ठाउँ छ, र मूर्ख को हृदय रमाहट को ठाउँ छ.
7:6 यो एक बुद्धिमानी मानिस द्वारा सही हुन राम्रो छ, को मूर्ख झूटो प्रशंसा द्वारा छल्न भन्दा.
7:7 लागि, thorns को crackling एक पट अन्तर्गत जल जस्तै, त्यसैले मूर्ख को हास्य छ. तर यो, पनि, खालीपनको छ.
7:8 गलत अभियोग बुद्धिमानको मानिस समस्याहरूको र आफ्नो हृदयको बल saps.
7:9 एक भाषण को अन्त शुरुवात भन्दा राम्रो छ. धैर्य अहङ्कारको भन्दा राम्रो छ.
7:10 चाँडै रिस सारिने छैन. रिस लागि मूर्ख को sinews मा बस्नुहुन्छ.
7:11 तपाईं भन्न हुँदैन: "पहिलेका पटक तिनीहरूले अब भन्दा राम्रो थियो कि कारण के तपाईं लाग्छ छ?"प्रश्न यस प्रकार लागि मूर्खता हो.
7:12 धन संग बुद्धि बढी उपयोगी र थप लाभप्रद छ, सूर्य हेर्न गर्नेहरूका लागि.
7:13 बुद्धि सुरक्षा रूपमा लागि, त्यसैले पनि पैसा सुरक्षा दिनुहुन्छ. तर सिक्ने र बुद्धि यो धेरै छ: तिनीहरूले एक जीवन प्रदान गर्ने जो तिनीहरूलाई possesses.
7:14 परमेश्वरको काम विचार, कुनै एक उहाँले अवहेलना छ जसलाई सच्याउन सक्षम छ कि.
7:15 राम्रो समयमा, राम्रो कुरा रमाइलो, तर दुष्ट समय देखि सावधान रहन. परमेश्वरले एक स्थापित छ लागि जस्तै, त्यसैले पनि अन्य, क्रममा कि मानिस कुनै पनि बस उहाँको विरुद्धमा उजुरी फेला सक्छ.
7:16 म पनि यो देखे, मेरो व्यर्थ को दिन मा: एक बस मानिसले आफ्नो न्याय मा डरावना, र एक impious मानिसले आफ्नो अरुको अहित गर्ने इच्छा मा लामो समय जीवित.
7:17 अचाक्ली बस हुन प्रयास नगर्नुहोस्, र थप बुद्धिमानी हुन प्रयास छैन आवश्यक छ भन्दा, नत्र तपाईं मूर्ख बन्न.
7:18 ठूलो impiety कदम चाल्न छैन, र मूर्ख हुन चयन छैन, तपाईं आफ्नो समय अघि मर्न नत्र.
7:19 तपाईं एक बस मानिस समर्थन गर्न लागि यो राम्रो छ. यसबाहेक, तपाईं उसलाई आफ्नो हात झिक्न हुँदैन, जसले परमेश्वरको डर, केही neglects.
7:20 बुद्धि शहर को बुद्धिमानी अधिक दस अगुवाहरू बलियो छ.
7:21 तर त्यहाँ कुनै बस पृथ्वीमा मानिस छ, जो राम्रो गर्छ र पाप गर्छ.
7:22 त्यसैले त, बोली छ कि हरेक शब्द आफ्नो हृदय संलग्न छैन, सायद तपाईं आफ्नो सेवक सुन्न सक्छ नत्र तपाईं को बिरामी बोल्ने.
7:23 आफ्नो अन्तस्करणको भनेर थाह, पनि, बारम्बार अरूको दुष्ट बोलेको छु.
7:24 म बुद्धि मा सबै परीक्षण गरेको छ. म भने छ: "म बुद्धिमानी हुन। हुनेछ" अनि बुद्धि मलाई टाढा हटाउनुभएपछि,
7:25 त्यसैले धेरै यसलाई अघि थियो भन्दा. बुद्धि धेरै गहिरो छ, त्यसैले उनको जो प्रकट गर्नेछ?
7:26 म मेरो प्राण सबै कुराहरू जांच छ, कि म थाहा हुन सक्छ त, र विचार, र बुद्धि र कारण बाहिर खोज्न, र म मूर्ख को impiety पहिचान हुन सक्छ भनेर, र imprudent को त्रुटि.
7:27 र म एक महिला मृत्यु भन्दा बढी तीतो फेला पारेका छौं: त्यो एक शिकारी पासोमा जस्तै जो छ, र जसको हृदय एक नेट जस्तै छ, र जसको हातमा चेन जस्तै हो. जसले प्रसन्न परमेश्वरले उनको भाग्न पर्छ. तर पापी उनको द्वारा जफत गरिनेछ जसले छ.
7:28 हेर, उपदेशक भने, म यी कुराहरू फेला पारेका छौं, एक पछि अर्को, म व्याख्या पत्ता लगाउन सक्छ क्रममा
7:29 जो मेरो प्राण अझै पनि खोज्ने र फेला परेन छ. एक हजार बीच एक मानिस, म फेला; ती सबै बीच एक महिला, म फेला.
7:30 यो एक्लै म भेट्टाएका छन्: परमेश्वरको मानिस धार्मिक गरे भनेर, र अझै उहाँले अनगिन्ती प्रश्न संग मिलावटी छ. कसले त बुद्धिमानी रूपमा ठूलो छ? र शब्द को अर्थ जो बुझे छ?
8:1 मानिसको बुद्धि आफ्नो countenance मा चमकता, र सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस को पनि अभिव्यक्ति परिवर्तन हुनेछ.
8:2 म राजाको मुख पालन, र परमेश्वरको सपथमा को आज्ञा.
8:3 तपाईं धैर्य आफ्नो उपस्थिति देखि फिर्ता गर्नुपर्छ, न त दुष्ट काम मा रहनुपर्छ. सबै को लागि भनेर उहाँलाई प्रसन्न, उहाँले गर्नेछ.
8:4 र उहाँको वचन अधिकार भरिएको छ. न त सक्षम जो कोहीले उहाँलाई भन्न छ: "तपाईं किन यसरी अभिनय गर्दै?"
8:5 जसले आज्ञा पालन दुष्ट अनुभव छैन राख्छ. एक बुद्धिमानी मानिसको हृदय प्रतिक्रिया गर्न समय बुझ्नुहुन्छ.
8:6 हरेक कुरा को लागि, त्यहाँ एक समय र मौका छ, साथै धेरै कठिनाइ रूपमा, मानिसको.
8:7 लागि उहाँले विगतका नजान्ने छ, र त्यो एक दूत को माध्यम द्वारा भविष्यमा को केही थाहा गर्न सक्षम छ.
8:8 यो आत्मा निषेध गर्न मानिसको शक्ति छैन, न त उहाँले मृत्युको दिन अधिकार छैन, न त उहाँले युद्ध बिच्छेद गर्दा आराम गर्न अनुमति छ, र न impious सुरक्षित impiety हुनेछ.
8:9 म यी सबै कुराहरू विचार, र म सूर्य अन्तर्गत गरेको भइरहेका छन् जो सबै काम गर्न मेरो हृदय लागू गरेका छन्. कहिलेकाहीं एक मानिस आफ्नै हानि अर्को माथि नियम.
8:10 म गाडे को impious देखेको छु. यी नै, जबकि तिनीहरू अझै पनि जीवित थिए, पवित्र स्थानमा थिए, र तिनीहरूले न्यायको कामदारहरूको रूपमा शहरमा प्रशंसा थिए. तर यो, पनि, खालीपनको छ.
8:11 मानिसहरू छोराहरू लागि कुनै पनि डर बिना दुष्कर्मलाई perpetrate, किनभने न्याय चाँडै खराब विरुद्ध उच्चारण छैन.
8:12 तर हुनत पापी आफूलाई को दुष्ट सक्छ एक सय पटक, र धैर्य गरेर अझै सहन, म यसलाई राम्रो तरिकाले परमेश्वरले डर गर्नेहरूलाई साथ हुनेछ भन्ने महसुस, जो आफ्नो अनुहार श्रद्धा.
8:13 त्यसैले, यो राम्रो impious जाने सक्छ, र आफ्नो दिन छैन लामो समयसम्म हुन सक्छ. र पारित टाढा छाया जस्तै प्रभुको अनुहार डर नगर्ने ती गरौं.
8:14 अर्को व्यर्थ पनि छ, जो पृथ्वीमा गरेको छ. त्यहाँ मात्र हो, दुष्कर्मलाई हुन कसलाई, तिनीहरूले impious कामहरू गरेका थिए हुनत रूपमा. र त्यहाँ impious छन्, जो धेरै सुरक्षित छन्, हुनत रूपमा तिनीहरूले बस को कामहरू अधिकार. तर यो, पनि, म एक धेरै ठूलो व्यर्थ हुन न्यायाधीश.
8:15 अनि त, म आनन्दित प्रशंसा, किनभने त्यहाँ सूर्य अन्तर्गत एक मानिस को लागि कुनै राम्रो थियो, खान र पिउन बाहेक, र हँसिलो हुन, र उहाँले आफ्नो जीवनको दिनमा आफ्नो श्रम देखि उसलाई केही लाग्न सक्छ किनभने, जो परमेश्वरले सूर्य अन्तर्गत उहाँलाई दिइएको छ.
8:16 र म मेरो हृदय लागू, त्यसैले म बुद्धि थाहा हुन सक्छ, र म पृथ्वीमा उत्तेजित गर्दछ कि एक खलबल बुझ्न सक्छ भनेर: यो एक मानिस छ, जो आफ्नो आँखाले कुनै निद्रामा लिन्छ, दिन र रात.
8:17 र म मानिस सूर्य अन्तर्गत गरिन्छ जो परमेश्वरको सबै ती कामहरू लागि कुनै व्याख्या पाउन सक्षम छ बुझे. अनि त, यस उहाँले खोज्न मेहनत गरिन् कि थप, त्यसैले कम धेरै उहाँले पाउन गर्छ. हो, भने पनि बुद्धिमान् मानिसलाई उहाँले थाह छ कि दावी थिए, उहाँले यो पत्ता लगाउन सक्षम हुन छैन.
9:1 म मेरो हृदय मार्फत यी सबै कुराहरू आएको छ, म ध्यान दिएर बुझ्न सक्छ त. त्यहाँ बस मानिसहरू साथै बुद्धिमानी मानिसहरू छन्, र आफ्नो काम परमेश्वरको हातमा छन्. र अहिले सम्म मानिस उहाँले प्रेम वा घृणा योग्य छ कि छैन भनेर रूपमा धेरै थाहा छैन.
9:2 तर भविष्यमा सबै कुराहरू अनिश्चित रहने, किनभने सबै कुराहरू बस गर्न र impious उत्तिकै हुन, असल र खराब गर्न, शुद्ध गर्न र अशुद्ध गर्न, जो बलिदान प्रस्ताव ती र जसले बलिदान नाइँनास्ति ती. असल हुन्, त्यसैले पनि पापी हुन्. रूपमा भ्कुटो कसम खाने काम प्रतिबद्ध गर्नेहरू, त्यसैले पनि सत्य कसम गर्नेहरू.
9:3 यो सूर्य अन्तर्गत गरिन्छ कि सबै कुराहरु धेरै ठूलो बोझ छ: एउटै कुरा सबैलाई कि. र मानिसहरू छोराहरू हृदयमा आफ्नो जीवनमा अरुको अहित गर्ने इच्छा र घृणा भरिएको हुँदा, त्यस पछि तिनीहरूले नरक तल तान्नुभयो गरिनेछ.
9:4 त्यहाँ सधैंभरि बसोबास गर्ने कुनै एक छ, वा यस सन्दर्भमा विश्वास पनि छ. एक जीवित कुकुर मरेको सिंह भन्दा राम्रो छ.
9:5 जीवित लागि तिनीहरू मर्नेछन् भनेर थाहा, अझै साँच्चै मरेका अब केही थाहा, न त तिनीहरूले कुनै पनि recompense छैनन्. तिनीहरूलाई को स्मृति लागि भूल छ.
9:6 त्यसै गरी, प्रेम र घृणा र ईर्ष्या सबै सँगै perished छ, न त उनीहरूले यस उमेर र सूर्य अन्तर्गत गरिन्छ जो काम मा कुनै ठाउँ.
9:7 त्यसैले त, जानुहोस् र आनन्द संग आफ्नो रोटी खान, र gladness आफ्नो रक्सी पिउन. आफ्नो काम परमेश्वरको प्रसन्न छन् लागि.
9:8 आफ्नो लुगा सबै समय मा सेतो होस्, र नदेऊ तेल आफ्नो टाउको अनुपस्थित हुन.
9:9 तपाईंलाई मनपर्ने जसलाई पत्नी जीवनको आनन्द उठाउन, सूर्य अन्तर्गत दिइएको छ जो आफ्नो अनिश्चित जीवनको सबै दिन, तपाईंको व्यर्थ को सबै समयमा. यस को लागि जीवन र आफ्नो श्रम आफ्नो भाग छ, सूर्य अन्तर्गत श्रम जो तपाईंसँग.
9:10 जो आफ्नो हात गर्न सक्षम छ, उत्कट यो गर्न. न काम को लागि, न त कारण, न त बुद्धि, न त ज्ञान मृत्यु मा अवस्थित हुनेछ, जो तिर तपाईं hurrying छन्.
9:11 म अर्को कुरा तिर आफैलाई गरिएका, र म देखे कि सूर्य अन्तर्गत, दौड तेज गर्न छैन, न त बलियो गर्न युद्धमा, बुद्धिमानको गर्न रोटी न त, न त धन को सिकेका गर्न, न त सिपालु गर्न ग्रेस: तर त्यहाँ एक समय र यी सबै कुराहरू लागि अन्त छ.
9:12 मानिस आफ्नै अन्त थाहा छैन. तर, माछा एक हुक संग समातिए छन् जस्तै, र चरा पासो संग कब्जा गर्दै, त्यसैले मानिसहरू दुष्ट समयमा जफत छन्, जब यो तिनीहरूलाई अचानक overwhelm हुनेछ.
9:13 यो बुद्धि, त्यसै गरी, म सूर्य अन्तर्गत देखेको छु, र म तीव्र यसलाई जांच छ.
9:14 त्यहाँ एउटा सानो शहर थियो, यसलाई केही मानिसहरूसँग. यो एक ठूलो राजा विरुद्ध त्यहाँ आए, जो यो घेरिएको, र यो चारैतिर निर्माण fortifications, र नाकाबन्दी पूरा भएको थियो.
9:15 र त्यहाँ भित्र फेला परेन, एक गरिब र बुद्धिमानी मानिस, र उहाँले आफ्नो बुद्धि मार्फत शहर मुक्त, र केही कि गरिब मानिस को त्यसपछि रेकर्ड गरियो.
9:16 अनि त, म बुद्धि बल भन्दा राम्रो छ भनेर घोषणा. तर कसरी यो छ, त्यसपछि, गरिब मानिसको बुद्धि घृणा संग उपचार छ कि, र आफ्नो शब्द पालन छैन?
9:17 बुद्धिमानको शब्दहरू मौन मा सुने छन्, थप त मूर्ख बीच एक राजकुमार को पुकारा भन्दा.
9:18 बुद्धि युद्ध हतियार भन्दा राम्रो छ. र जसले एउटा कुरा मा offends, धेरै राम्रो कुरा गुमाउनु पर्छ.
10:1 मरिरहेका झिंगा को लेप को मिठास बर्बाद. बुद्धि र महिमा छोटो र सीमित मूर्खता भन्दा बढी अनमोल छ.
10:2 एक बुद्धिमानी मानिसको हृदयलाई दाहिने हातमा छ, र मूर्ख मानिसको हृदयलाई बायाँ हातमा छ.
10:3 यसबाहेक, मूर्ख मानिसले बाटो साथ हिड्ने छ रूपमा, पनि उहाँले हुनत आफूलाई बुद्धिमानी होइन, उहाँले सबैलाई मूर्ख हुन ठान्नुहुन्छ.
10:4 अख्तियार धारण गर्ने एक आत्मा तिमी माथि rises भने, आफ्नो ठाउँ नछोड, किनभने attentiveness सबैभन्दा ठूलो पाप बन्द गर्न कारण हुनेछ.
10:5 त्यहाँ जो म सूर्य अन्तर्गत देखेको छु दुष्ट छ, एक राजकुमार उपस्थिति देखि बढ्नु, गल्तीले भने:
10:6 एक उच्च मर्यादा नियुक्त मूर्ख मानिसले, र धनी उहाँलाई मुनि बसिरहेका.
10:7 म घोडाहरू मा सेवकहरू देखेको छु, र अगुवाहरू सेवकहरू जस्तै भुइँमा हिड्ने.
10:8 जसले digs एक पिट यो फस्न हुनेछ. र जसले एक भ्काडी अलग च्यातिन्छ, एक सर्प उसलाई दु: ख हुनेछ.
10:9 जसले टाढा वहन पत्थर तिनीहरूलाई द्वारा हानि हुनेछ. र तिनीहरूलाई द्वारा जसले तल कटौती रूखहरू घाइते गरिनेछ.
10:10 फलाम नीरस छ भने, र यो त्यो बाटो अघि थियो भने, तर धेरै श्रम गरेर नीरस गरिएको छ, त्यसपछि यो sharpened गरिनेछ. र बुद्धि परिश्रम पछि आउने.
10:11 जसले मा गोप्य झूट केही मनमनै बाइट्स एक सर्प भन्दा कम छ.
10:12 एक बुद्धिमानी मानिसको मुखबाट शब्दहरू मनोरम छन्, तर मूर्ख मानिसको ओठ हिंसा तल उहाँलाई फेंक हुनेछ.
10:13 आफ्नो शब्द को सुरुमा मूर्खता हो, र आफ्नो भाषणको अन्त्यमा सबैभन्दा Grievous त्रुटि हो.
10:14 मूर्ख आफ्नो शब्द वृद्धि गर्छ. एक मानिस उहाँलाई अघि छ के थाहा छैन, र तिनलाई प्रकट गर्न के भविष्यमा उसलाई पछि हुनेछ सक्षम गर्ने छ?
10:15 को मूर्ख को कठिनाइ शहर जान थाहा नगर्ने ती सताउनेछैन.
10:16 तपाईं धिक्कार, जसको राजा देशमा एक केटा हो, र जसको अगुवाहरू बिहान उपभोग.
10:17 अनमोल जसको राजा महान छ देशमा छ, र जसको अगुवाहरू उचित समयमा खान, स्फूर्ति र आत्म-भोग लागि.
10:18 आलस्य द्वारा, एक रूपरेखा तल ल्याए गरिनेछ, र हात को कमजोरी द्वारा, एक घर मार्फत संक्षिप्त पर्छ.
10:19 हाँस्न गर्दा, तिनीहरूले रोटी र रक्सी बनाउन, जीवित भोजमा सक्छ भनेर. र सबै कुरा पैसा आज्ञाकारी छन्.
10:20 तपाईं राजा निन्दा गर्नु हुँदैन, पनि आफ्नो विचार मा, र तपाईं एक धनी मानिसको दुष्ट कुरा हुँदैन, पनि आफ्नो निजी कोठामा मा. हावा को पनि चरा आफ्नो आवाज पूरा गर्नेछ लागि, र जो छ पखेटा तपाईंको धारणा घोषणा हुनेछ.
11:1 चलिरहेको पानी माथि आफ्नो रोटी कास्ट. लागि, लामो समय पछि, तपाईँले पुन फेला पर्छ.
11:2 सात एउटा भाग दिन, र साँच्चै पनि गर्न आठ. लागि थाहा छैन के दुष्ट भविष्यमा पृथ्वीमा हुन सक्छ.
11:3 यदि बादल भरिएको छ, तिनीहरूले पृथ्वीमा वर्षा अगाडी खन्याउन हुनेछ. एक रूख दक्षिण खस्दा भने, वा उत्तर गर्न, या जो दिशा यसलाई पर्न सक्छ, त्यहाँ रहनेछ.
11:4 जसले हावा heeds छर्न छैन. र जसले बादल ठान्नुहुन्छ कहिल्यै कटनी गर्नेछ.
11:5 एउटै तरिका भनेर आत्माको बाटो थाहा छैन, हड्डी एक गर्भवती महिला को गर्भमा सँगै सामेल छन् न त बाटो, त्यसैले तपाईं परमेश्वरको काम थाहा छैन, सबै को निर्माता गर्ने छ.
11:6 बिहानी पख, तपाईंको बीउ छर्न, र साँझ, आफ्नो हात समाप्त हुनु गरौं छैन. लागि थाहा छैन सक्छ यी मध्ये खडा, एक वा अन्य. तर दुवै यदि अप सँगै उठ्नेछ, धेरै राम्रो.
11:7 प्रकाश सुखद छ, आँखा सूर्य हेर्न को लागि र यो रमणीय छ.
11:8 धेरै वर्ष को लागि एक मानिस बसोबास भने, र उहाँले यी सबै आनन्दित छ भने, उहाँले अन्धकारमा पटक को धेरै दिन सम्झना गर्नुपर्छ, जो, जब उनि आइपुगे हुनेछ, व्यर्थ को पछिल्लो आरोप हुनेछ.
11:9 त्यसैले त, आनन्दित, हे जवान, आफ्नो युवावस्थामा, र आफ्नो हृदय आफ्नो युवा को दिन राम्रो छ के मा रहन गरौं. र आफ्नो हृदयको मार्गमा हिंड्न, र आफ्नो आँखाको धारणा संग. अनि त्यो थाहा, यी सबै कुराहरूको, परमेश्वरको न्याय गर्न ल्याउनेछ.
11:10 आफ्नो मनले रिस हटाउन, र आफ्नो शरीरमा देखि अलग दुष्ट सेट. युवा र खुशी को लागि खाली छन्.
12:1 आफ्नो युवा को दिन मा आफ्नो सृष्टिकर्ता सम्झना, अघि कष्ट समय आएको र वर्ष नजिक, जो बारेमा भन्नेछन्, "यी मलाई खुसी छैन।"
12:2 सूर्य अघि, र ज्योति, र चन्द्र, र तारा darkened छन् र बादल पनि वर्षा पछि फिर्ता,
12:3 जब घर को अभिभाबकहरुको डर हुनेछ, र बलियो मानिसहरू लहरना हुनेछ, र अन्न पीसने गर्नेहरूलाई निष्क्रिय हुनेछ, एउटा सानो नम्बर बाहेक, र keyholes मार्फत जो ती darkened गरिनेछ.
12:4 र तिनीहरूले सडकमा ढोका बन्द गर्नेछ, अन्नको grinds जसले को आवाज नम्र तुल्याए गरिनेछ गर्दा, र तिनीहरूले एक उडान कुरा को ध्वनि मा विचलित गरिनेछ, र गीतको सबै छोरीहरू बहिरा हुनेछु.
12:5 त्यसै गरी, तिनीहरूले माथिको कुराहरू डर हुनेछ, र तिनीहरूले तरिका भय हुनेछ. बादाम रूख फलिफाप हुनेछ; को locust fattened गरिनेछ; र केपर बोट छरिएका हुनेछ, किनभने मानिसले आफ्नो सदाको घरमा जान पर्छ, र mourners सडक मा वरिपरि घूमछन हुनेछ.
12:6 अघि चाँदी कर्ड भङ्ग छ, र सुनको ब्यान्ड टाढा खींचती, र pitcher को फोहरा माथि चोट छ, र पाङ्ग्रा भएको cistern माथि भङ्ग छ,
12:7 र यसको पृथ्वीमा धूलो लाभ, जो बाट यो थियो, र आत्मा परमेश्वरको फिर्ता, जसले यो प्रदान.
12:8 Vanities को व्यर्थ, उपदेशक भने, र सबै व्यर्थ हो!
12:9 र पछि उपदेशक धेरै बुद्धिमानी थियो, उहाँले मानिसहरूलाई सिकाउनुभयो, र उहाँले पूरा कुरा वर्णन. र खोजी गर्दा, उहाँले धेरै Parables बनेको.
12:10 उहाँले उपयोगी शब्दहरू खोजे, र उहाँले सबै भन्दा धार्मिक शब्द लेखे, जो सत्यको पूर्ण थिए.
12:11 बुद्धिमानको शब्दहरू एक goad जस्तै हो, र जस्तै नङ गहिरो fastened, जो, शिक्षकहरूको सल्लाह मार्फत, एक पास्टर द्वारा निस्केको सेट छन्.
12:12 तपाईंले यो भन्दा कुनै थप आवश्यक पर्छ, मेरो छोरा. थुप्रै पुस्तकहरू को बनाउने कुनै अन्त छैन. र अत्यधिक अध्ययन शरीरका एक कष्ट छ.
12:13 हामीलाई सबै भाषणले को अन्त गर्न सँगै सुन्न गरौं. भगवानको त डर मान, र उहाँको आज्ञा पालन. यो मानिस को लागि सबै छ.
12:14 अनि त, गरेको छ लागि र प्रत्येक त्रुटि लागि, भगवान न्याय ल्याउनेछ: चाहे त्यो राम्रो वा खराब थियो.